sheeko jacayl oo dhab ah!!!! qaybta 1 aad – ASM Raage
sheeko jacayl oo dhab ah!!!! qaybta 1 aad
Qaybta 1 aad
Ahmed waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada muqdishu, qiyas ahaana da’diisu waa 17, sanadka ama taariikhdu waxaa ay ku astaysantahay 2005. Ahmed waqtiga intiisa badan waxa uu ku qaataa cayaariska iyo daawashada sport-ga gaar ahaan kubadda cagta, inta ka dhiman waqtigiisa waxa uu caawiyaa wiil uu abti u yahay oo pharmacy haysta.
Maalin ayuu siddii caadada ahayd yimid pharmacy-gii si uu u caawiyo wiilkii uu abtiga u ahaa laakiin waxaa uu la kulmay inankii uu abtiga u ahaa oo gabar ay sheeko wadaag ahaayeeni ay la joogto. Isbariidin kadib wiilkii uu abtiga u ahaa ayaa meeshii isku baray gabadhii iyo abtigiis ahmed. Maalmo kadib Ahmed oo pharmacy-ga jooga ayaa waxaa taleefankii soo wacday gabadhii xariirka jacayl la leheed wiilka uu abtiga u yahay. Taleefankii ayuu ka qabtay salaan kadibna waxa uu u sheegay in uusan joogin saaxiibkeed kaftan yar kadina waala is macasalaameyey.
Maalintaa wixii ka dambeeyey Ahmed iyo gabdhii si guud ayey isku fahmeen xitaa mararka qaar si shaqsi ah ayey isu soo wici jireen oo dad asaxaab ah ayey noqdeen. Mudo markey sidaa ahayd ayey gabadhii u soo bandhigtay in ay barto gabar kale oo ay asaxaab iyada ahaayeen maadaama ahmed uusan markaas lasocon wax gabar, sidaa ayuuna uga aqbalay.
Taleefanka laga wada hadlayey wuxuu ahaa landline isla markiiba gabadhii kale ayey qadka soo gelisay sidaaas ayeyna isku bartay Ahmed iyo fartuun. Ahmed aad ayuu ula dhacay gabadha iyaduna rabitaan ayey u muujisay. Sheekadoodu aad ayey u sii fogaatay, jacayl xoog lehna meeshii ayuu ka dhashay. Ahmed iyo Fartuun weli da’dii qaan gaarka ayey weli ku jiraan arimaha jacaylkuna weli safiican uma daadegin laakiin kaliya dareenkooda ayaa hagaya. Fartuun waa gabar gacanta iyo maalmulka hooyadeed ku jirta loomana ogola haasaawi iyo wax u dhow.